Turn On Ideas: “ငွေဝယ်ကျွန်တဲ့လား”
"ပညာတော်သင် သီးသန့် သွားတာ မဟုတ်ပဲ တခြားမှာ အလုပ်နဲ့ သွားသမျှ ငွေလိုချင်လို့ မဟုတ်လား... ဒါဆို 'ငွေဝယ်ကျွန်' ပဲ..."
အဖြေ = “မှားးးးတယ်”၊ “သိပ်ကို မှားတယ်”၊ “အရမ်းကို မှားတယ်”၊ “အကြီးကြီးမှားတယ်”။
ငါတို့ လိုချင်တာ၊ လိုအပ်တာ ငွေ၁ခုတည်းလို့ထင်နေလား???
ကဲ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ဆွေးနွေးကြရအောင်...
အဲဒိ ပညာတွေသင်ပြီး၊ ငွေဝယ်ကျွန်မလုပ်ပဲ (အထက်မှာ ပြောသလို(ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်)) မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ဗျာ...
--- ဘယ်နေရာတွေမှာ သွားပြီး အသုံးချရမလဲ?
--- ဒီတံတားကြီးကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ဆောက်ခွင့်ပြုမယ်ထင်သလား?
--- ကိုယ်လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်လို့ ထင်သလား?
--- တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာတွေကို စနစ်တကျ အသုံးချခွင့်ရှိမယ်ထင်သလား?
တကယ့်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ အရည်အချင်းတွေ ချပြခွင့် မရနိုင်ဘူး။
ပညာကို တန်ဖိုးထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေအတွက် ဘယ်လိုနေရာမျိုးဟာ မနေသင့်တဲ့ အရပ်လဲ???
နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ အရည်အချင်းမပြည့်မှီတဲ့ ပညာရေးကို အစစအရာရာ ချို့တဲ့စွာသင်ကြားလာခဲ့ရသူတွေဟာ ဒီလိုနေရာဒေသမျိုးမှာ မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို မနည်းကို တည့်မတ်ပြီး ထိန်းကျောင်းလာခဲ့ရတာပါ။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ... ကျန်ရှိနေသေးတဲ့၊ ပညာကို တကယ်လိုလားတဲ့၊ အခွင့်အလမ်းတွေမရှိသေးတဲ့ လူငယ်တွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ ဘယ်လောက်တောင် ထိရှနေကြပြီလဲ။
ဘယ်နှယောက်ကတော့ ဖြစ်သလို ရေစုံမျောလိုက်ပြီလဲ (သို့) မိုးခါးရေသောက်လိုက်ကြပြီလဲ?
တတ်ထားသမျှ ပညာကို အသုံးချခွင့်ရနိုင်မယ့်၊ ထိုက်သင့်တဲ့ (ဒီမှာ မိဘကိုလုပ်ကျွေးဖို့လောက်ပဲ ထားပါ) လခရနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မျိုးမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရလာပြီဆိုပါစို့...
--- ကံအကြောင်းမလှလို့ ဒီလူငယ်ဟာ အလုပ်သမားတစ်ယောက် ရပိုင်ခွင့်တွေကို မတရားချိုးနှိမ်တဲ့ နေရာမှာ လုပ်နေရမှာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
--- အဆင့်မမှီတဲ့ ပညာရေးကြောင့် အရည်အချင်းမပြည့်မှီခဲ့လို့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ မထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်ကျနေတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်...
အဲဒိ အခက်အခဲတွေအတွက်တော့ ကျွန်တော် ခံယူထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပြောရရင်...
လိုတာအကုန်ဖြည့်... ဒါပဲ။(စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောပေါ့)
ကံအရမ်းကောင်းနေချိန် မိမိလိုချင်တဲ့ high-salary-positionအတွက် offerရတယ်ဆိုပါစို့...
(interviewerဟာ အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာသာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို ခန့်မှန်းရတာပါ။)
တစ်လ ၃၀၀၀လောက် ရနိုင်တဲ့ အလုပ်သမားဟာ တစ်လကို လခ၅၀၀၀ရတဲ့(ဒီမှာ ကျန်တဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေကိုလဲ ရနိုင်တဲ့)အလုပ်မျိုးမှာလုပ်နေရလဲ အလုပ်မှာ အရည်အချင်းမပြည့်မှီရင် လခများများနဲ့ အခွင့်အရေးတွေ မဆုံးရှုံးရပေမဲ့ သူဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရနေမှာပါ...
ဒီလိုဆို... အလုပ်ပြောင်းချင်ပြောင်း၊ (သို့) မပြောင်းဘူးဆိုရင်.. အချိန်ကျလာလို့ မိမိအရည်အချင်းပြရတော့မယ်တဲ့အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပေတော့။
၅၀၀၀ပေးထားရင်တော့ ၅၀၀၀နဲ့တန်တဲ့ အရည်အချင်းတော့ရှိမှဖြစ်မှာ...
လခများပေမဲ့ responsibilities သိပ်မများတဲ့၊ တာဝန်အရမ်းမကြီးတဲ့ အလုပ်တွေလဲ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကို မလိမ်ညာပဲ၊ အမှန်အတိုင်းမြင်၊
ပြီးရင် လိုတဲ့အရည်အချင်းတွေကို ဖြည့်ပေတော့...
(ကိုယ်လိုချင်သလောက်လေ... supervisor လောက်ဖြစ်ချင်ရင် supervisor လောက်အရည်အချင်းရှိအောင်ကြိုးစား၊ manager ဖြစ်ချင်ရင်လဲ ဒီလိုပဲပေါ့...)
နောက်တခုက လစာ - အဲဒါကတော့ အင်မတန် ရှင်းပါတယ်။ ကိုယ်ရတာ တန်တယ်ထင်ရင်ဆက်လုပ်၊ ကိုယ်က Over qualified ဖြစ်နေလို့ မတန်ဘူးထင်ရင် တူတူတန်တန် ပေးနိူင်တဲ့ ကုမ္ပဏီရှာ...ဒါပါပဲ။
သူများတွေလောက် ကိုယ်မဖြစ်နိုင်သေးရင်လဲ အောင်မြင်နေတဲ့ လူတွေကို ရန်လိုနေမဲ့အစား မုဒိတာပွားပြီး ကိုယ့်မှာလိုတာလေးကို ဖြည့်ပေါ့ဗျာ။
ပညာတော်သင်သီးသန့်သွားခဲ့တဲ့သူ ငွေဝယ်ကျွန်အဖြစ်မခံပဲ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ဘာတွေလုပ်မလဲ စိတ်ဝင်စားလို့ပါ။
လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ့်ကျင့်တရားပါ။
အစ်မချစ်ကြည်ရဲ့ ပို့စ် "ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ"နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကွန်မန့်၁ခုကို (မိမိသိသလောက်) ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့မိတာလေး အမှတ်တရသိမ်းထားလိုက်တာ...
"ငါေ၇းထားတာ နိုင်ငံခြားကို သွားသူတွေထဲမှာ ပညာသွားသင်သူလား ၊ ပိုက်ဆံအတွက် အလုပ်သွားလုပ်သူလား ကို ပြောထားတာ..."
တကယ်က အဲဒိကိစ္စကိုပဲ အဓိကထားပြီး ရှင်းပေးခဲ့တာ...
ကဲ နောက်ဆုံးတော့ တူညီတဲ့ ခေါင်းစဉ်၁ခုအောက်ရောက်သွားတာပါပဲ...
အစ်မချစ်ကြည်ရဲ့ ချစ်ကြည်အေး: ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ... ပို့စ်ရဲ့ ကွန့်မန့်တွေထဲက ကျွန်တော်ကြိုက်တာလေးတွေ ယူထားတယ်...
အစ်မ SHWE ZIN U said...
မရွှေစင် အလုပ်လုပ် တုန်းက နေမကောင်းလည်း သွား off ရက်လည်း အလုပ်စိတ်မချ ဆိုတော့ ကိုယ့်အားရက် တောင် ကိုယ် ကောင်းကောင်း မနေရအောင် ကျွန်စိတ် ရှိတယ်လို့ ပြောကြတယ် ဟုတ်ဘူး လို့ အဲဒါမှ ကိုယ့် အလုပ် လို သဘောထားတဲ့ သခင်စိတ်ပါလို့
ဘာဆိုဘာမှ Transparency မရှိ၊ စည်းစံနစ်မရှိတဲ့ အနေအထား အဲလို အခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ်လိုချင်တာရဖို့ သွားဖြဲပြရ၊ ကျွေးမွေးရ ဒါမျိုးတွေနဲ့ ကင်းချင်တဲ့ ကျမ စရိုက်ကြောင့် မဖြစ်နိူင်တာ...
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုင်နေသရွေ့ သခင်လည်းကိုယ် ကျွန်လည်းကိုယ်ပဲ။
Posted by TURN-ON-IDEAS at Wednesday, August 11, 2010
Totally agree with you, my friend....
Exactly same idea..
နိုင်ငံခြားမှာ နေရတာ လူမျိုးခွဲခြားမှုတို့၊ အသားရောင်ခွဲခြားမှုတို့၊ နိုင်ငံခြားသားချင်းအတူတူ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံက လူကိုမှ နှိမ်ချင်တာတို့ ကြုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားတိုင်း မကောင်းဘူး မပြောပါဘူး။ ကြင်နာတတ်သူ၊ စိတ်ထားကောင်းသူတွေဆီက အားပေးမှုနဲ့ အကူအညီတွေလဲ ရခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အိန္ဒိယက လာတဲ့သူကို နှိမ်ပြီး တရုတ်ဆို မနှိမ်တာကို ခုမှ ပိုနားလည်ပြီး ပြည်တွင်းက အရာကြီးတို့ အမားတို့ ခံစားချက်ကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်လာတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားမှာ မနေရင် ကျွန်မအဖေနဲ့ မောင်နှမတွေကို ဘယ်သူက ရှာကျွေးမှာလဲ။ ဒီအဖြေတစ်ခုနဲ့တင် နိုင်ငံခြားမှာ ကျွန်ခံတယ်ပြောပြော ကျွန့်အဖေ ခံတယ်ပြောပြော ဆက်နေရ ဆက်ရုန်းကန်ရမှာပဲ။
ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုပဲ ထားတယ်။ ငါ ပျော်ပျော်မပျော်ပျော် ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ဆင်းရဲ စိတ်ဖိစီးပေ့စေ ငါ့အဖေကို ရှာကျွေးနိုင်မယ့် နေရာမှာ နေကိုနေရမယ်လို့။ ဝမ်းနည်းစရာတွေ မျက်ရည်ကျစရာတွေလဲ နိုင်ငံခြားမှာ အကြိမ်ကြိမ် ကြုံရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မိဘအတွက် ဆိုတာတစ်ခုနဲ့ပဲ လာသမျှဒုက္ခ ခံရမယ်ဆိုပြီး တောင့်ခံပါတယ်။
အထီးမကျန်ဘူးလားမေးရင် ကျန်တာပေါ့။ ဒီဒဏ်မခံနိုင်လို့ ကိုယ် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရင် အဖေ့ကို ဘယ်သူ ရှာကျွေးမှာလဲ။ သားမက်လုပ်စာဆိုတာ သမီးလုပ်စာလောက် တစ်ပြားမကျန် ယူလို့ကောင်းမလား။ ဒီတော့ အထီးကျန်လဲ ဘာထွက်ပေါက်မှ မရှာရ၊ ကျန်ပေ့စေဆိုပြီး ငုံ့ခံရတာပဲ။
လူချင်း ကံချင်း မတူကြပါဘူး။ ကျွန်မဘဝက ဘယ်နေနေ အခက်အခဲများပြီး ကြမ်းတမ်းခဲ့ပေမယ့် အတိတ်က ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ကျွန်မထက် ပိုကောင်းသူတွေ ကျွန်မထက် အဆင်ပြေချောမွေ့ကြတာ ဝမ်းသာစရာ တွေ့ရပါတယ်။ ကံဆိုတာ ရုန်းကန်ရလေ ပိုသိလေပဲ။ ကံကောင်းအောင် ဒါနသီလဘာဝနာနဲ့ ကံကို ပြုပြင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒီနည်းကို စောစောက တိခဲ့ဘူးလေ။ မသိတော့ ပေါ့ပေါ့ နေခဲ့မိတာပေါ့။ တခြားသူတွေကိုတော့ ဝီရိယနဲ့ ဥာဏ်စွမ်း အစွမ်းကုန် မြှင့်သလို ကံကလဲ (နဂိုကံ ကောင်းပြီးသား ရေကန်အသင့် ကြာအသင့် မိသားစုကလာသူမဟုတ်ရင်) မပါမဖြစ်မို့ သာသနာ ထွန်းကားရာ အရပ်မှာ နေခွင့်ရတုန်း ကုသိုလ်ကောင်းမှု အစွမ်းကုန်လုပ်ပြီး ကံကို မြှင့်ခဲ့ဖို့ အကြံပေးချင်တယ်။
သူ့နေရာနဲ့သူ နေရာမပေးတဲ့ ကိစ္စ အဲဒီပိုစ့်မှာ ပါးပါးလေး ချပြခဲ့ဖူးတယ်
ဦးနှောက် ယိုစီးမှု အကြောင်းလဲ ရေးချင်သေးတယ်...
အမရဲ့ပိုစ့်ကို လာဖတ်၊ မန့် ပြီး ပိုစ့်လေး ခုလို တင်ထားတာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ...စိတ်ဝင်တစား ဆွေးနွေးခဲ့လို့လည်း ဝမ်းသာတယ်။ အမြင်တွေ၊ ခံယူချက်တွေ စိတ်ထားတွေကတော့ ကွဲပြားနေကြအုံးမှာပါပဲ မောင်လေးရေ...
အ၇ူးတစ်ယောက်နဲ့ ဖင်ခေါင်းကျယ် စိတ်ကြီးဝင် အသိုင်းအဝိုင်းပါလား... ကုသိုလ်ကံ ဆိုတာကို ထည့်မတွက်မိကြဘူးကိုး သနားစ၇ာ .....
တဲ့... ဒါဆို ပြန်ပါလားကွ...
KKK >>> friend, actually, we always try to see the real truth upon situation, accept it and find the best way to live on with good regards as possible as we can...
anonymous >>> လေးစားပါတယ်ဗျာ... ကျွန်တော်လဲ မိဘအတွက်ဆို အမြဲရှေ့တန်းတင် စဉ်းစားတတ်တဲ့ သားတစ်ယောက်ပါ... ရှေးဘဝတွေက လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကြောင့် ဒီဘဝဖြစ်လာရတာ... ကောင်းတာတွေပဲ လုပ်နေပေမဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပဲ ရနေသေးရင်လဲ "ကိုယ့်ပြုသောကံ ကုသိုလ်ကံ ကိုယ့်ထံပြန်လာသည်"လို့ ကိုယ့်စိတ်ကို သတိပေးထိန်းချုပ်ပြီး ကောင်းသောစိတ်ထား၊ ကောင်းသောလုပ်ရပ်တွေ စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်နိုင်ပါစေဗျာ...
အစ်မချစ်ကြည် >>> လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ... ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကတော့ ဘဝတစ်ကွေ့ရဲ့ အမှတ်တရတွေ သိမ်းထားဖို့ အတွက်လောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်က အစ်မတို့၊ အစ်မကေ၊ အစ်မပန်ဒိုရာ၊ အစ်မသက်ဝေတို့လို ဗဟုသုတလဲမများ စာလဲ သေချာမရေးတတ်ဘူး။
ဘုဘု >>> ကျွန်တော်ပြောသမျှတွေမှာ ကုသိုလ်ကံကို ထည့်မတွက်မိတဲ့ စကားမျိုး မပါဘူးလို့တော့ ယုံကြည်ပါတယ်... anyway, ဒေါသထွက်စရာဖြစ်သွားခဲ့ရင် ဆောရီးပါ...
T-O-I သို. ........
ပို.စ်အသစ်ကို မျှော်နေပါ့မယ် ....
စာလာဖတ်သွားတယ်..။အစ်မချစ်ကြည်အေး ရဲ့ပိုစ်မှာကတည်းက ညီ့ ကွန်မန့်
မောင်လေး > အစ်ကို... ကျေးဇူးပါ
သူငယ်ချင်းရေ ကောင်းတယ်၊ ဆက်ရေးပါ။
လင်းက နိုင်ငံခြားမှာ ပညာလည်းသင် အလုပ်လည်းလုပ်။